तपाईसंग पुन प्रयोग गर्न मिल्ने कपडा छ, वा तपाईँलाई सेकेण्डह्याण्ड कपडा निशुल्क चाहिएको छ ? लियो क्लवसंग सम्पर्क गर्नुहोस् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २९ मंसिर २०७६, आईतवार ०८:२०
शनिवार बिहान करिब ११ बजे गोरखा सदरमुकामको हरमटारी चोक शहिदगेट अगाडी त्रिपाल बिछ्याएर युवाहरु लुगा फिँजाईरहेका थिए । त्यहाँ बालवालिका, वृद्धवृद्धा देखि वयस्कहरुले जाडो र गर्मीमा लगाउन मिल्ने कपडा राखिएको थियो ।
कुनै नयाँ थिए भने कुनै प्रयोग गरिसकिएको तर फेरी लगाउन मिल्ने खालको देखिन्थ्यो । निशुल्क कपडा बितरण हुने थाहा पाएपछि सदरमुकाम आसपासमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएकाहरुको भिँड बाक्लिँदै गयो ।
क्लवका सदस्यहरुले कपडा फिजाउँदा देखि करिब एक घण्टा पर्खिएर त्यहाँ आएकाहरुले कपडा लिएका थिए । करिब एक घण्टामा त्यहाँ भएको सबै कपडा सकिएको थियो । लियो क्लव अफ गोरखाका सदस्यहरुले सदरमुकामको फेन्सी पसलमा ‘स्टक’ रहेको र एक पटक प्रयोग गरिसकेको तर पुन प्रयोग गर्न मिल्ने कपडा धोएर त्यहाँ राखेका थिए । ‘हामीले चार सय वटा कपडा बितरण ग¥यौँ’ लियो क्लव अफ गोरखाका सचिव वर्षा ढकालले भनिन् । एक जनालाई दुई सेट कपडा दिइएको थियो ।
कपडा लिनेमा धेरै महिलाहरु थिए । ‘चिसो अत्याधिक हुँदा सम्म अबको दुई महिना हामी हरेक शनिवार फरक(फरक ठाउँमा कपडा बितरण गर्ने सोचमा छौँ’ लियो क्लव अफ गोरखाका अध्यक्ष बिदुरबल्लव भट्टराईले भने । निशुल्क लिइएको कपडा बितरण गरेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, चिसोको समयमा कठ्याङ्ग्रिएर हिडेकाहरुलाई मद्धत गर्न अभियान चलाएको उनले बताए । गोरखामा कपडा निशुल्क बितरण गर्ने अभियान पहिलो पटक भएको हो । जो कोहीले पनि लियो क्लवका सदस्यलाई खबर गरेर पुन प्रयोग गर्न मिल्ने कपडा दिन सक्नेछन् । क्लवका सदस्यहरुले संकलन र आवस्यकता भएकाहरुलाई बितरण गर्नेछन् । बिहिवार देखि अत्याधिक चिसो बढेको गोरखामा शुक्रवार दिनभर वर्षात हुँदा उत्तरी गोरखामा हिमपात भयो ।
शनिवार पनि राम्रो सँग घाम नलाग्दा अन्य दिन भन्दा चिसो बढेको छ ।
‘अहिले पनि सडक पेटीमा सुत्ने, बाक्लो लुगा नभएकाहरु कठ्याङ्ग्रिएर हिड्ने गरेकाले उनीहरुलाई लक्षित गरी कपडा बितरण गरिएको लियो क्लव अफ गोरखाका सचिव वर्षा ढकालले बताईन । कपडा ब्यवशायी र बजार क्षेत्रका स्थानीयले उक्त अभियानमा साथ दिएका थिए । गोरखा सदरमुकाममा मात्रै नभएर साप्ताहिक रुपमा संञ्चालन हुने उक्त अभियान अन्यत्र पनि संचालन गर्ने उनले बताईन । ‘तपाईहरु सँग प्रयोग गरेका पुन प्रयोग गर्न मिल्ने कपडा छ भने हामीलाई दिनुहोस्, हामी आवस्यकता भएकाहरुलाई पु¥याईदिन्छौँँ’ उनले भनिन् । प्रयोग भएको कपडा दिँदा धोएर दिन क्लवले अनुरोध गरेको छ । कपडा जम्मा गरेपछि सुचना जारी गरेर कहिले कुन ठाउँमा कपडा बितरण गरिनेछ भन्ने यकिन गरेर बितरण हुने क्लवले जनाएको छ । अझै केही कपडा बाँकी रहेको र संकलनको क्रममा रहेकाले अभियान निरन्तर चल्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
सित्तैमा कपडा पाएपछि खुसी लगाउन मिल्ने कपडा सित्तैमा पाएपछि लिन आएकाहरु पनि दंग थिए । थुप्रोमा राखिएको कपडा छान्दै लगाउँदै गर्दा केही बेर हाटबजार जस्तो दृष्य देखिएको थियो भने केहीलाई लगाउनमै हतारो थियो । गोरखा नगरपालिका ७ का प्रकाशचन्द्र गान्धारीले चिसो मौसममा आफुले सित्तैमा पाइन्ट र ज्याकेट पाएपछि लियो क्लवको प्रशंसा गरे । ‘मैले अहिले चाहिने बित्तिकै किनेर लाउन सक्दैन थिएँ’ उनले भने ‘यहाँ पैसा तिर्नु परेन, लुगा पनि पाएँ, खुसी लागेको छ ।’ ६० वर्षिया बिभा नेपालीले एउटा स्विटर र सुरुवाल लिईन । प्याँज बिक्री गर्न सदरमुकामको हरमटारी चोक आएका बेला सित्तैमा लुगा बितरण गरेको थाहा पाएपछि उनी त्यहाँ पुगिन् ।
‘प्याँज पनि बचेर सकियो, लुगा पनि पाएँ, यो लुगा किन्न सिजनभरी प्याँज बेचेको पैसा खर्च हुन्थ्यो’ खुसी हुँदै उनले भनिन् ‘यो काम अरु समयमा पनि भईदिइ हुन्थ्यो ।’ बिहान बेलुकी निबेक गरेर छाक टार्नेका लागि सित्तैमा कपडा पाउन खुसीको कुरा हो भन्दै कपडा छान्दै एक अर्कामा मुखामुख गर्दै थिए । ‘लयो क्लव अफ गोरखाले सुरु गरेको उक्त अभियान प्रभावकारी भएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा अध्यक्ष भगवानबाबु मास्के बताउँछन् । ‘गरिव, दिनदुखी हरुलाई सेवाको भावनाले चिसो मौसममा लत्ता कपडा सहयोग गर्नु राम्रो हो’ उनले भने ‘यो अभियानमा सबैको साथ हुनुपर्छ, यसलाई शहरउन्मुख गाउँहरुमा पनि पु¥याउँदा अझै प्रभावकारी हुन्छ ।’
चितवनको कालिका नगरपालिका-३ की दुर्गा चौधरीले ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा फड्के किराले आतंक मच्चायो